ဇန္နဝါရီလ 10, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု4comments
နောက်တစ်နေ့ဗားရှင်း client ကိုဘက်မှာအချို့အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအပြောင်းအလဲများကိုထည့်သွင်းရန်သွား, အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ script ၏ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းတင်ရန်နှင့်အတွင်းအသုံးပြုသောကတခြား script များ၏ဝယ်လိုအားတင်ပေါ် switched ပါပြီ (jQuery အစရှိတဲ့ UI ကိုအဖြစ်, Google က API ကို Translate, မိုက်ကရိုဆော့ဖ API ကိုနှင့်အခြားသူများ Translate).
အဆိုပါပြောင်းလဲမှုအများကြီးပိုမြန်စာမျက်နှာဝန်ဆိုလိုသည်ကပိုပြီးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်လာ. ဒါ့အပြင် hangups တတိယပါတီ script များ၏နှေးကွေးတင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခဲ့ (ထိုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံသည့်တစ်ဦးအဖြစ် ဒီ bug ကို) ဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်.
ဤသည်လွှတ်ပေးရန်လည်းတစ်ခု update ကိုပါဝင်သည်စေခြင်းငှါ, jQuery 1.4 သောအများကြီးပိုမြန်အင်ဂျင်ကိုရှိပါတယ်, ထိုသို့ဇန်နဝါရီလ 14 ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းအဘို့အ planed ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက, ကျနော်တို့က 15 ရက်နေ့မှာဖြန့်ချိဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်.
pre-လွှတ်ပေးရန်ပြီးသားဒီ site ပေါ်တွင်အပြေးနေသည်, ဒါကြောင့်သင်ဘာသာပြန်ထားသောစာမျက်နှာများတွင်မဆိုပြဿနာများကိုကြုံတွေ့ရလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားကျေးဇူးပြုပြီး.
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: jQuery, မြန်နှုန်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ
ဇန္နဝါရီလ 11, 2010 တွင် 12:26 နံနက်
မင်္ဂလာပါ! အဆိုပါဝစ်ဂျက်ရဲ့နိုင်သလား “ခေါင်းစဉ်” edited ခံရ? အတော်များများက Widgets တွေပြုပြင်နိုင်သည့်ခေါင်းစဉ်ရှိသည်ထင်ရ. သို့သော်လည်းငါသည်ဖြင့် Transposh အတွက်တဦးတည်းကိုမတှေ့နိုငျ. ခေါင်းစဉ်တင်ထားရန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်? စခရင်ပုံကိုကြည့်ပါ: https://apex.box.net/shared/static/q8ty57vob7.png
ဇန္နဝါရီလ 11, 2010 တွင် 1:08 နံနက်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အဆိုပါ todo list ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်
ဇန္နဝါရီလ 10, 2011 တွင် 8:36 ညနေ
အေးမြ widget က. ပေါ်လာအသစ်များကိုပါလိမ့်မည်သည့်အခါ?
ဇန္နဝါရီလ 10, 2011 တွင် 9:37 ညနေ
ကြွယ်ဝသော အပေါ် version 0.9.9.2 – မ git
Alvaro အပေါ် version 0.9.9.2 – မ git
jackly အပေါ် version 0.9.9.2 – မ git